तोते, ताजा फूलहरु, यसको सुन्दर, उज्यालो पक्षति संग आँखा प्रसन्न जस्तै। उनि लगभग गाउन थिएन, तर तिनीहरूलाई कुराकानी गर्न कसरी रोचक! ती सबै, साना तरंग cockatoos ठूलो देखि, को माधुर्य, शब्द र पनि सम्पूर्ण अभिव्यक्ति सम्झना गर्न सक्षम छन्। को पाल्तु जनावर साँचो सधैं स्वस्थ र सक्रिय भएको छ, तपाईं जान्नु आवश्यक भएको सुगा खुवाउन के र कसरी राम्ररी तिनीहरूलाई हेरचाह गर्न। बजार र पशु पसल धेरै आयात र घरेलू अन्न मिक्सहरू प्रदान गर्दछ। अनुभवी प्रजनकों उच्च गुणस्तरीय अनाज प्रस्ताव र बीउ रसायन संग उपचार छैन, र कीटनाशक समावेश छैन चिरपरिचित कम्पनीहरु मात्र मिश्रण प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
कुनै पनि खाना खरीद गर्दा, यो यसको वैधता चासो लिन आवश्यक छ। आफ्नो पाल्तु जनावर दिन अघि घर, तपाईं फोहोर र ढुसी लागेको अनाज को यो मा उपस्थिति को लागि खाना जाँच गर्न आवश्यक छ। केही पानी धोए शंकास्पद खाना सल्लाह, र त्यसपछि एक सानो सुक्खामा (तर राम्ररी रोस्ट छैन!)। निस्सन्देह, यो उपचार राम्रो छ, तर धोए र गलत-सुकेको चारा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
बन्द तोते (macaws, cockatoos) बीउ पागल (अखरोट, अखरोट, सूर्यमुखी बीउ, नट देवदार) थपियो हुन सक्छ। मेनु पागल र बीउ बस एक पटक एक महिना त्यसपछि मात्र मिनेट रकम तिनीहरूले भारी जिगर संग लोड हुनुहुन्छ किनभने थपिएका छन्, र budgies। नरिवल र काजू कुनै प्रदान तोते को प्रजाति।
कस्तो सुगा खुवाउन - तरकारी वा फल? प्रकृति मा, चरा फल, तरकारी, विभिन्न जडीबुटी र पात खाने। घर पनि शरीर गरेको सामान्य चरा सबै प्रक्रियाहरू बग्ने यी उत्पादनहरु थप्न आवश्यक छ। तोते सधैं खुसी गाजर, जो twig बीच consolidating, सारा दिन सक्छ र एक grater मा जमीन गर्न सकिन्छ र कम बोसो पनीर संग मिश्रण हो। केही प्रजनकों मह गाजर को एक थोपा थप्न सिफारिस गर्छौँ। पनि तोते स्वेच्छाले एक कद्दू, खीरे, बन्दागोभी, खुर्सानी, को फली मा सिमी खान। को टमाटर बीउ तिनीहरूले शरीरका भन्दा रुचाउँछु। Turnips र बीट सानो परिमाणमा दिनुपर्छ, एक सानो पूर्व-जोश। को सूप र अन्य "मानव" खाद्य पदार्थ देखि तरकारी छैन चरा गर्न दिनुपर्छ।
फल चरा फारममा, ताजा स्थिर (defrosting पछि) हो छोराछोरीको puree, को चीनी-मुक्त र पूर्व-भिगो पानी हो जो सुकेको फल को रूप मा। साथै, तोते, विशेष गरी ठूलो जातिहरु, खुसी किसमिस, मिति र खुबानी खान। आफ्नो आहार सबै फल, साधारण, persimmons, मेवा र Avocado, Piersyn तोते लागि घातक जसमा बाहेक समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रजनकों चराहरूले Melons र तरबूज दिने सिफारिस छैन, साथै सल्लाह रूपमा अङ्गुर र अनार सीमित गर्न।
फल बाहेक, तोते जस्तै जामुन। सबै फल र जामुन राम्ररी धोएर गर्नुपर्छ। चेरी, चेरी, प्लम र खुबानी बीउ हटाउन आवश्यक र साइट्रस पील मा।
के उहाँले बोसो प्राप्त भएको थियो कि एक सुगा खुवाउन? रूखहरू Twigs सबै वर्ष दौर उपलब्ध छन्। तिनीहरूले काटेर छन् राम्ररी पाल्तु जनावर धोए र दिनुभयो। हिउँदमा पानी मा सबै भन्दा राम्रो पूर्व-सेट शाखा, को अन्तस्करणले गर्न खोल्न थाले। यो आहार पूरक फाइबर मा चरा मात्र होइन सुनिश्चित छ र तत्व पहिल्याउन, तर पनि समान रूप यसको चुच्चो पीसने गर्न मद्दत गर्छ, र तिनीहरूलाई एक मनोरंजक खेलौना गर्दछ।
तपाईं चरा स्याउ, ऐंसेलु, चेरी, Cranberry, चेरी, नागफनी, पहाड खरानी, मेपल, Willow, वृक्ष को शाखा दिन सक्छन्। ओक, चेरी, चिनार, नासपाती को Contraindicated शाखा, सबै conifers। तोते र जस्तै sprouted अन्न अनाज: यो घाँस तिनीहरूले खुशी साथ खुरचना।
त्यहाँ तोते लागि हानिकारक छन् कि धेरै बिरुवाहरु छन्। तिनीहरूलाई केही गर्दा अरूलाई विषाक्त पात वा फल हो, किनभने गन्ध को खतरनाक छन्। अनुभवी प्रजनकों कडा यस्तो लसुन, प्याज, चेरी (twigs र फल), कुम्मैत, साग र सबै मसला बिरुवाहरु रूपमा बिरुवाहरु संग सम्पर्क बाट तोते रक्षा गर्न सल्लाह छन्; lemongrass, जुनिपर, buckthorn, ओखर, barberry, Rosemary, adonis, marigold, स्टेटजोन्स wort, yarrow, tansy, buttercup, periwinkle, मूल, peony, घोडा-पुच्छर, हप, सहिजन, सैलंडन, Eleutherococcus, azalea, amaryllis, निगालो, Heath, Gladiolus, जलकुंभी, फर्न, nightshade, primula, तुलिप्स। यो सूची exhaustive छैन।
पशु उत्पादन देखि एक सुगा के खुवाउन? यी दूध र दुग्ध उत्पादन, अन्डा र मासु समावेश गर्नुहोस्। केही प्रजनकों कहिलेकाहीं उसिनेर चिकन थप्न ठूलो तोते मा एक आहार सुझाव दिन्छौं। अरूलाई विरुद्ध कडा छन्। डेयरी उत्पादन मात्र कम बोसो र चीनी-मुक्त संग दिइएको गर्न सकिन्छ। घरेलु पनिर, दही, अमिल्याएर पाकेका दूध, दही जस्तै तोते। उबला अन्डा मुख्य रूप जवान चरा छन्। वयस्क मा, प्रोटिन चरा जीवित एकल, गरिबी सहन कि हर्मोन को सक्रियता गराउँछ।
गर्न प्रजनन तोते आफ्नो मेनुमा सफल छन् संलग्न निर्देशन अनुसार सिल मा नुन र तेल, मकै बिना porridge, पकाएको थप्न आवश्यक, भिटामिन। तपाईंले तिनीहरूलाई सेतो चक र सेतो माटो प्रस्ताव, मास्क लागि बेच्छ। धेरै उपयोगी र ताजा तयार रस, शोरबा नितम्ब, chamomile र नागफनी को एक किसिम। त्यहाँ सधैं खमीर तोते लागि खतरा छ देखि कहिल्यै, कड लिवर तेल र ताजा रोटी दिनुहोस्। ब्रीडर्स पनि यो चरा गरेको चुच्चो हिट गर्न अनुमति छैन सक्छन् हुन, कि तोते हानिकारक मानव लार चेतावनी दिए।
एक खरायो को लागि केज - राम्रो बाँच्न pet
Polipterus सेनेगलकी (Polypterus senegalus)। माछा polipterus - मर्मतका र प्रजनन
Acana - बिरालो खाना: लाभ, बेफाइदा र समीक्षा
बिरालोहरु बारेमा रोचक तथ्य जान्न
परमाणु पनडुब्बी "युद्ध तिल"। यूएसएसआर को गुप्त विकास
मिन्स्क मा स्मारक "Yama": इतिहास, वर्णन, फोटो
पाइक लागि के माछा साँच्चै प्रभावकारी छ?
सम्भव कारण: किन आफ्नो निद्रामा moaning मान्छे हो
को क्रास्नोडार क्षेत्र मा आराम
के वाकवाकी संग मद्दत गर्छ
कार्टेगो नोवा3(होटल, स्पेन): समीक्षा
आहार समायोजन: खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन समावेश